Nika umgangatho kwindlela oyila ngayo kwaye ulibale usetyenziso | Izidalwa ezikwi-Intanethi
En Ihlabathi eliya lisanda ngokwanda kwaye apho umsebenzisi anawo amandla okuphelisa igama lenkampani ngonqakrazo olunye, unikeze ngamava omsebenzisi olungileyoNokuba usebenzisa usetyenziso lwesiza okanye iprojekthi yewebhu, kubaluleke kakhulu.
Ke ngeli xesha ndiza kulo yabelana ngomxholo esele sithethe ngayo amaxesha ngamaxesha, kokubini ukwenziwa, nakumanqaku kunye namaqela engxoxo: Amava oxhulumaniso.
1 Yintoni amava okudibanisa?
2 Unokwenza ntoni njengomyili?
Yintoni amava okudibanisa?
Ngokusisiseko umbono ngulo umyili akufuneki akhathazeke "kuphela" malunga nokuyila ii -apps, iiwebhusayithi okanye nayiphi na imveliso enokutsalwa, kodwa nayo le Kuya kufuneka ucinge ngalo lonke ujongano olunokusebenzisa umsebenzisi Ukunxibelelana nenkampani, nokuba kungenxa yenkxaso yejelo lokuthengisa, iposti kuFacebook, icandelo leendaba lebhlog okanye usetyenziso ngokwalo.
«Umyili Kufuneka ucinge ngamava aqhagamshelekileyo Eqhubeka ngaphaya kwescreen kwaye ifikelela kuwo onke amanqaku onxibelelwano»
Ndiya ndikholelwa oko Umzobi wegraphic kufuneka azithathele ingqalelo zonke ezi ngongoma Esikuyo kwaye siza kuthetha nayo yonke into ukuze siqhele onke amava omsebenzisi xa kuziwa uzive umgangatho xa usebenzisa usetyenziso.
Emva koko, indawo ekulula ukuyisebenzisa ngokugqibeleleyo ayinangqondo, ngonxibelelwano oluhle, kodwa oko oku kubonelela ngenkonzo yenkxaso elawulayo kunye noxinzelelo Umsebenzisi, kuba amava omsebenzisi aya kuthintelwa kwaye akukho mntu uya kukhumbula ii icon ezintle oziyileleyo kwaye zihambelana ngokugqibeleleyo nayo yonke indawo Ngaphandle kokuba usebenza ngaphakathi kweprojekthi apho bonke abathathi-nxaxheba kunye nabaqulunqi bangabalandeli beStar Wars, into enifana nayo (isigqebelo) okanye dlala i-ping-pong kunye ne-CEO yenkampani yakho, Siyakuqinisekisa ukusukela ngoku ukuba ayizukuba lula kuwe njengokuba umyili wemizobo tshintsha indlela elisebenza ngayo iqela lokuthengisa. Kodwa ungazama ukunciphisa iintlungu zomsebenzisi ukwenza amava alungileyo koku, uhlawula ngakumbi ngakumbi kula maphepha ekungekho mntu uthanda ukuchitha ixesha elininzi kuwo «Nceda» okanye «Qhagamshelana»Kuba siza kunyaniseka, eli candelo liyadika.
Unokwenza ntoni njengomyili?
Kwaye akukho nzima ukufumana iisayithi / usetyenziso olunonxibelelwano olungakholelekiyo, kodwa xa uzama ukuya kwicandelo "loNcedo" okanye iscreen "soQhakamshelwano", sifumana uyilo olungakumbi kunokuba kubonakala ngathi zivela ngqo kwi-blogspost (Google, ayisiyonto yobuqu le.)
Ngale nto siyabona ukuba ezinye iinkampani azikhathazeki nikeza umsebenzisi wokugqibela uyilo oluthandekayo Ukuthi, yiza, ndiyayithanda uyilo lweli phepha, ndiza kuhlala ixesha elide ndilindwendwela. Kwaye yile nto encinci ngabaqulunqi abancinci kufuneka baqale ukuyazi loo nto Amava amnandi agqitha nakwisikrini kwaye oku kufikelela kwimeko-bume iphela apho umsebenzisi asebenzisana nophawu.
Kwiminyaka ethile edlulileyo imisebenzi yoyilo yayiqikeleleka ngakumbi kwaye bathathe inxaxheba kwiseti egxile kubuchule bemizobo. Namhlanje bafuna ulwazi oluninzi ngeendlela ezahlukeneyo kunye neendlela zokuthengisa, ukuhlela, ulawulo lwabasebenzi nokunye, ngamanye amagama, Yonke imihla umsebenzi woyilo ungaphezulu ngokudala amava Kubantu abayila iwebhusayithi okanye iapp.
Kulungile, singatsho ukuba uyilo njengoko sisazi luyatshintsha, kodwa wena ungumyili wemizobo kangakanani? unomdla wokubonelela ngokulula kwiprojekthi yomthengi kwiindawo ezithile zoku? Ngaba oku kuyacetyiswa kuwe? Yazi loo nto Uyilo lweprojekthi luthetha ngawe njengomyili Kwaye uyilo olungathandekiyo noluncedo lunokukuyeka ekubeni unxibelelane neminye imisebenzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Yeka ukucinga ngesicelo kwaye uqalise ukuzoba amava
Olunye uncedo lwee-mockups ukunika ubuchule ngakumbi kuyilo lwakho